अरु सँग स’ल्किय को भन्दै श्री’मती ले ल’गाई दिए ताल्चा…….(भिडियो हेर्नुहोस) – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र १५, २०७८ समय: १:४२:२१
By Nepalnews -February 16, 20210203
अविश्वासले मान्छेलाई कुन अवस्थासम्म पूराउँछ भन्ने कुराको उदाहरण पेश गरेका छन् ।आफ्नी बुढीले अरुसँग ल’सप’स गर्छ भन्ने आशंकामा आफ्नै बुढाको पाइन्टमा ताल्चा लगाईदिए पछि बुढाले उ’जुरी गरे । आफुभन्दा निकै कम उमेरका बुढा अरु केटिसँग बरालिने शं’का गर्दै ती महिलाले पाइन्टमा ताला ठो’केकि बताएकि छिन। यस्तो मुर्ख्याइँ गर्ने मानिस नेपालका भने होइनन् ।मेक्सिकोका एक ४० वर्षे बुढीले आफ्नी २९ वर्षे बुढाको पाइन्टमा ताला लगाइदिएको घ’टना र्सार्वजनिक भएको छ ।
आफ्नो पाइन्टमा बुढीले ताला लगाइदिँदा आफु दिनमा घण्टौँ सम्म पाइखाना समेत जान नपाएको भन्दै ती युवा प्रहरी समक्ष पुगेपछि यो घ’टनाको पर्दाफास भएको हो । तर ती युवतीले अब आफुले बुढाको पाइन्टमा ताल्चा नलगाउने लिखित प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
यो समाचार को पूरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला।
एजेन्सी – ३३ बर्षिय रा’यन जे’सेन अ’चानक म’स्तिष्कमा र’क्त’स्राव भएपछि मृ’त्यु भयो । अस्पतालका कर्मचारीहरूले एउटा अ’प्रत्याशित इ’शारा देखाए। “अस्पतालले हाम्रो लागि अ’न्तिम पटक यति राम्रो काम गरि’दियो की हामीलाई मेरो भाइको कुकुरलाई ‘बि’दाइ’ दिनको लागि ल्याउन अनुमति दियो ता’कि उनी जान्दछन् कि उनको मा’नव घर कहिल्यै किन आएन।
यदि तपाईं मेरो भाईलाई चि’न्नुहुन्थ्यो भने, उहाँ साँच्चिकै आफु जत्तिकै कुकुरलाई माया गर्थे, ”रा’यनकी बहिनी मि’शेलले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखिन्।
जब भिडियो रा’यन र उसको कुकुर मो’लीको बीचमा टे’न्डर पनी परिवार स’र्कलको लागि ब’नाइएको थियो, तर यसलाई वि’श्वभरबाट प्र’तिक्रिया आउन सुरु भयो। मि’शेल लेख्छिन्, “अरूको प्र’तिक्रियाबाट हामी नि’कै आ’भारी छौ, स’बैका कु’रा सु’न्छौ सबैको प्र’तिक्रियाबाट हामी आ’भारी भएका छौं, यो दु’खद घ’डीमा यो शो’कमा हामीले यति धेरै व्य’क्तिहरू स’हभागी हुन्छन् भन्ने कल्पना पनि गरेका थि’एनौ।”
रा’यनकी बहिनीले अ’न्तिम पटक भाइको अगाडी पु’गेको कुकुर र भाइलाई भ’न्छिन्, चि’न्ता नगर भाइ अब हाम्रो हातमा छ “कुकुरको बारेमा चि’न्ता नगर! हामी उसलाई एउटा परिवारको स’दस्य ज’स्तै गरि रा’ख्दै छौं,
जसरि तिमीले राखेका थियौ !!!तिमि न भए पनि अब यो परिवारको हि’स्सा बनाइ राख्ने छौ। ” बाँ’कि भिडियोमा हेर्नुहोस , भिडियो हेर्न यहा क्लिक गर्नुहोस
Last Updated on: August 31st, 2021 at 1:42 am